Mutyairi weZink anozopa zvirinani kuenderana nemitambo yemavhidhiyo | Linux Vakapindwa muropa
Mutyairi weZink anozopa zvirinani kuenderana nemitambo yemavhidhiyo
El Zink mutungamiriri yeOpenGL paVulkan inowedzera kuvandudzwa kwekutsigirwa kwemavhidhiyo mazita emitambo, akadai seMetro: Chiedza chekupedzisira. Tine chikwereti chese kuvandudza Mike Blumenkrantz, uyo akaenderera mberi nebasa rake rinoshamisa pane mutyairi kuti ave nechokwadi chekuti mimwe mitambo inoshanda nayo.
Nekuburitswa kwakapfuura kweZink, Mike akagona kutarisa mamwe mabhenji ePhoronix akasiyana sei mazita haana kushanda kwete kana ivo vakapihwa zvisirizvo. Saka akadzikira kubasa kuti agadzirise kodhi yekodhi yemutyairi.
El kufambira mberi Izvo zvakaitwa pamusoro paZink izvozvi zvinoshamisa, kunyange hazvo chiri chokwadi kuti achine nzira refu yekuenderera mberi nekuvandudza zviripo. Nekudaro, iyo inoshamisa nhanho kumberi yayatora uye nemazita matsva ayo anogona ikozvino kumhanyisa pasina dambudziko anokosheswa. Vamwe vachiri kuda kumwe kugadziridzwa, kunyanya avo vanobva kuFeral Interactive, seHITMAN.
Kune mamwezve mazita ane nyaya dzekuita, senge Basemark uye Bioshock Infinite. Asi zvingangoita kuti ramangwana rekuvandudza richave rakagadzirisa zvese izvi. Ichokwadi ndechekuti kufambira mberi kwenyika yemifananidzo uye mitambo paLinux zvave zvichishamisa mumakore apfuura. Ndiani angazvifungidzira mukutanga kwema1990 kana 2000?
Nenzira, kana iwe uchiri kusaziva kuti chii chinonzi Zink controller, uyu ndiye Gallium controller yeiyo Mesa chirongwa iyo inoburitsa Vulkan API inoshevedza pachinzvimbo chekunongedza yakatarwa yeGPU dhizaini. Izvi zvinogona kushandiswa kuwana yakazara OpenGL rutsigiro pane zvishandiso kana masisitimu anongotsigira Vulkan.
Para mamwe mashoko About Gallium3D, mutyairi weZink, pamwe neMESA uye mamwe madhiraivha anowanikwa uye mapuratifomu, unogona shanyira iyi link. Pano unogona kuwana zvinyorwa zvaunoda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Graphics » Mutyairi weZink anozopa zvirinani kuenderana nemitambo yemavhidhiyo